Qaar kamid ah Xoogaga Mucaaridka Syria ee magaalada Daraya oo is-dhiibay – The Voice of Northeastern Kenya
Qaar kamid ah Xoogaga Mucaaridka Syria ee magaalada Daraya oo is-dhiibay
Magaalada Daraya oo ku taala koonfurta caasimada Dimishiq ayey ciidamada dowlada Bashar Al Assad go’adoon geliyeen muddo 4 sano ah.
Mucaaridka ku hubeysan oo u badnaa shacabka magaaladaasi kasoo jeeday oo ahaa iyagu sunni ayaa Jimcihii shalay is-dhiibay kadib markii heshiis uu dhexmaray ciidamada Dowlada iyo garabkooda.
Magaalada Daraya ayaa ahayd magaalada ugu dhaw caasimada Dimishiq oo ku jirta gacanta xoogaga mucaaridka, arrintaasi oo keentay in dowlada Bashar Al Assad ay culeys xoogleh saarto maleeshiyaadka halkaasi ku sugnaa, heshiiska dhexmaray xoogaga isdhiibay iyo dowlada ayaa waxaa cambaareeyey ururada kale ee mucaaridka Siiriya oo arrintan ku tilmaamay mid dhabar jab ku ah qorshahooda ay doonayeen inay mustaqbalka weerar ku qaadaan bartamaha Dimishiq iyo Madaxtooyada Bashar Al Assad.
Dhamaan maleeshiyaadkii hubeysnaa ee magaalada ku sugnaa ayaa ogolaaday inay hubka dhigaan kadibna loo qaado gobalka Idlib ee waqooyiga wadankaasi Siiriya, waxaa sidoo kala magaalada gebi ahaan laga daad-gureeyey dhamaan shacabkii halkaasi ku sugnaa oo ay lasoo gudboonaatay macaluul xiligii ay ku jireen go’adoonka.
Kumanaan dadka rayidka ah ayaa lagu qaaday gawaari basas ah, waxaana la sheegay in intooda badan la geyn doono qeybo kamid ah caasimada Dimishiq waxaana jira dad walaac ka muujinaya in shacabka ay dhibaato kala kulmi doonaan dowlada Bashar Al Assad
← Golaha Ammaanka oo cambaareeyay tijaabada Waqooyiga Kuuriya ee gantaalkeeda ridada dheer
Gudomiyaha gudiga IEBC Axmad Issaq Xassan oo sheegay in uu diyar u yahay in uu xilka baneeyo →